Madaxweynaha Galmudug oo safar deg deg ah ku tegaya Dhuusamareeb - Awdinle Online
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in Maanta uu safar deg deg ah ku tago Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgalgaduud.
Qoor Qoor oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho ayaa safarkiisa deg dega ah waxaa uu ku saleysan yahay sidii uu ku heli lahaa muddo kale oo uu kusii joogi karo Muqdisho maadaama mudada 45 cisho ee Dastuurka Galmudug dhigaya in aanu Madaxweynaha ka maqnaan karin deegaanka ay ka dhamaatay.
Shalay gelinkii dambe ayaa qorshuhu ahaa in Madaxweynaha uu tago Magaalada Dhuusamareeb, hayeeshee uu dib uga dhacay safarkiisa, waxaana la filayaa in uu Maanta halkaasi tago dibna uu uga soo laabta Gelinka dambe ee Maanta ama Maalinta berto ah.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) ayaa Magaalada Muqdisho ku sugnaa muddo 45 Cisho ah, isaga oo ka qeyb galayay shirar looga hadlayay Arrimaha doorashooyinka iyo dadaalada la xiriira xal ka gaarista muranka doorashada.
Previous articleSoomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Canada
Next articleQarax lala beegsaday Ciidamo Kenyan ah & khasaaro ka dhashay